Tookit: fitaovana ilaina 5 amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Apple namela fampiharana iPhone zanatany maro nefa tsy nampifanaraka azy ireo tamin'ny iPhone toy ny fampiharana: mijery (izay efa hita tao amin'ny iOS 6), manodidina… Ary tsy tiako manokana ny ilaozan'izy ireo ny rindranasa mety hahasoa ny mpampiasa iPad. Nanampy tao amin'ny iOS 6 izy ireo, ny Clock application ary noheveriko fa tsara izany.
Ny mpampiasa IPad dia manana vahaolana roa mety hitranga amin'ity olana ity: tsy raharahiana ireo utilities ireo na misintona ny rindranasa "misolo" ireo izay tsy ananantsika amin'ny iPad. Androany izahay manome anao famakafakana fampiharana iray izay Fitaovana ilaina 5, Andao hojerena:
Toolkit no fangatahanay. Azo alaina ho an'ny iPhone sy ho an'ny takelaka Apple, ny iPad izy io. Isaky ny fitaovana dia manana fampiasa 5 hafa izy (na dia miverimberina aza ny sasany) saingy mahasoa kokoa amin'ny iPad io noho ny amin'ny iPhone. Andao hojerentsika ny fitaovana ampiasain'ny Toolkit amin'ny iPad:
Fitsipika: Mazava fa fampiasa iray izay tsy hampiasantsika firy, fa azo ampiasaina amin'ny fandrefesana hatramin'ny 20 sentimetatra na 8 santimetatra. Ao afovoany dia hanana fidirana mivantana amin'ireo fitaovana hafa isika.
Hijery: Izy io dia famantaranandro misy famolavolana somary mitandrina, izay tsy mahasolo ny Apple teratany. Ny faharoa dia tsara kokoa. Clock ao amin'ny Toolkit dia hanisy marika ny andro, ny andro, ny tanana minitra, ny tanana ora ary ny tanana faharoa. Ao amin'ny zorony dia hanana ny hitsin-dàlana mankany amin'ny fitaovana hafa izahay.
Haavo bubble: Raha manangana fananganana ianao na te hahalala raha avo ny gorodonao, miaraka amin'ny iPad sy ny haavo Level an'ny rindrambaiko Toolkit dia azonao atao izany. Apetratsika eo ambonin'ny avo ny iPad ary hiteny ilay takelaka raha avo na tsia ny haavony.
Protractor: Araka ny voalazan'ny lohateny, protractor iray izay hanampy antsika handrefy ny zoro izay mahaliana antsika na asaina ataon'ny ankizy kely ao am-pianarana.
Kompas: Kompas no antenaiko ao amin'ny iOS 6, fa ny hafaliako rehetra amin'ny fantsakana. Apple dia tsy manitatra ary tsy nametraka ny fampiharana amin'ny iPad. Hanana ny Avaratra, atsimo, atsinanana ary andrefana isika hitarika antsika amin'ny làlana rehetra izay tiantsika ho fantatra hoe ho aiza.
Araka ny hitanao, ny rindranasa iray izay, na dia mandany vola aza izany, dia mahasoa amiko rehefa misy fanontaniana apetrako momba ny refy, ny haavon'ny, ny zoro na ny kompà. Tsy ny famantaranandro, satria araka ny nolazaiko hoe tiako kokoa ny iOS tompon-tany. Hita ao amin'ny App Store amin'ny vidiny 0,89 euro, Tena amporisihiko ianao.
Fampahalalana bebe kokoa - Roa taona sy tapany aty aoriana… tonga ny app Clock
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Tookit: fitaovana ilaina 5 amin'ny iPad-nay
"Fananganana fananganana" dia toa diso hevitra aho raha ny hevitro.
Juan Alfonso dia hoy izy:
Toy izany koa no noeritreretiko rehefa namaky azy io XD
Valiny tamin'i Juan Alfonso
Misaotra betsaka tamin'ny fampitandremana.
Notsapainay ny Griffin PowerJolt Micro
Radar Zapper, ilay fitaovana fampitandremana radara feno indrindra, no nohavaozina tamin'ny fampidirana ny fangatahan'ny mpampiasa